Nahazo Hatramin’ny $100.347 Hampafana Kokoa An’i Syria Mampalahelo Anaty Ririnina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2013 9:39 GMT
Efa nampitampim-bava ny $56.287 azon'ny fanentanana nialoha ny 3 Desambra ka lasa nahazoany ny Fifaninanan'ny Razoo Foundation #GivingTuesday (manome isa-talata), izay nahazoany $15.000 fanampiny. Mbola mitombo hatramin'izao ny sandan'ny fanampiana.
Kareem Omara, iray amin'ireo mpikarakara, niteny fa faly izy fa tao anatin'ny fanentanana, ary nampiany fa mbola afa-mandeha lavitra ny fananana fanantenana:
Syriana mpanao matoandahatsoratra Robin Yassin-Kassab, izay nandray anjara tamin'ny fanentanana ihany koa, miantoka ny fahadiovam-pitantanan'ny mpikarakara, ary nanampy fa:
Telo taona anaty hotakotaka, lavitry ny ho faty ny ririnina ao Syria, ary tahaka ny tsy hita ho akaiky ho avy ny lohataona. Rehefa tsy daroka baomba – dia ny fidobodoboky hatsiaka no mitazona ny anjely kelin'i Syria tsy hatory amin'ny alina. Tamin'ny Desambra 2012, ny fikambanana “Save the Children” (Avoty Ny Ankizy) nanaiky fijoroana vavolombelona sy sary hanangona-kevitra momba ny zavamisy sarotra iainan'ny fianakaviana Syriana mandritra ny ririnina. Voatsonga ao amin'ny tatitra ny tenin'ilay 11 taona Ali nilaza fa na dia nisy aza ny fanampiana dia tsy ampy izany:
Mikaonty na ny vola madinika indrindra aza. Mbola azonao atao ny manome eto.